The New Djibouti Sheraton oo kula tartamaysa Kempinski iyo Atlantic sidii Hoteelada ugu sareeya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jabbuuti » The New Djibouti Sheraton oo kula tartamaysa Kempinski iyo Atlantic sidii Hoteelada ugu sareeya
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Jabbuuti • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Soo -booqdayaasha Jabuuti waxay dib u soo noolayn karaan hal -abuurka jidka ugu qadiimsan ganacsiga milixda iyaga oo dhinac socda geel ay ku raran yihiin “dahab cad”, kuna quustaan ​​Whale Sharks, oo ka mid ah meelaha kaliya ee adduunka ah ee uu qofku aad ugu soo dhowaan karo oo uu si gaar ah ula yeelan karo xayawaankan . Martidu waxay booqan karaan Lac Assal cagaaran oo firfircoon, oo 30 daqiiqo u jirta Sheraton Djibouti, harada biyaha cagaaran ayaa soo jiidata dhakhaatiirta juqraafiga iyo dhakhaatiirta foolkaanada adduunka oo dhan.
Kempinski, Atlantic iyo hadda Sheraton Djibouti ayaa ku tartamaya martida riwaayadda Xeebta Jabuuti.
Maanta Sheraton wuxuu ku dhawaaqay inuu halkaas ka furmayo ka dib markii hal milyan oo doollar la geliyay hoteelkiisa oo ka kooban 185 qol
Goobaha dib loo milicsaday waxay ujeedadoodu tahay in la abuuro jawi ay martidu ku dareemi karto raaxo iyo deggenaansho, ha ahaato shaqo, kulan, ama nasasho.
Iyada oo ku salayneysa xididadeeda sidii xarun bulsho oo loogu talagalay dadka maxalliga ah iyo martida goobaha calanka adduunka, habka cusub ee Sheraton wuxuu abuuraa khibrad dareen leh oo dhammaystiran oo leh meelo lagu xiro, wax soo saar leh, oo la dareemo qayb ka mid ah wax.
Waxay ku taallaa Plateau du Serpent oo ku taal Quarter -kii hore ee Diblomaasiyadeed, huteelku wuxuu u jiraa masaafo u jirta faras magaalaha Jabuuti oo 10 daqiiqo u jirta Madaarka Caalamiga ah ee Jabuuti Ambouli. Halyeeyga caanka ah ee Sheraton Djibouti ayaa ahaa huteelkii ugu horreeyay ee caalami ah ee laga furo caasimadda, isagoo isku daray dhaqanka hodanka ah ee reer Jabuuti iyo heerarka martigelinta adduunka. Huteelka waxaa aqoonsaday Jamhuuriyadda Jabuuti sannadka ugu horreeya ee furitaankiisa waxaana lagu soo qoray shaambadda adeegyada boostada ee sannadlaha ah. Meel sumcad ku leh bulshada maxalliga ah, Sheraton Djibouti waxay xusuus gaar ah u haysaa dad badan oo reer Jabuuti ah oo ku raaxeystay booqashooyinka soo jiidashada leh, kulannada qoyska, iyo xafladaha dhaqanka ee hoteelka.
MAALIN-CUSUB “SQUARE DADWEYNAHA”
Xudunta Sheraton Djibouti ayaa ah hoolka lagu faano muuqaal aad u qurux badan oo dhalaalaya oo muujinaya khariidada Jabuuti. Barxadda lobby -ga waxaa dib loogu ekeysiiyay “Fagaaraha Dadweynaha” ee hoteelka; meel bannaan, oo furan oo dadka ku martiqaadaysa inay wada joogaan ama waqti u qaataan inay keligood ka dhexeeyaan dadka kale, oo abuuraya dareen tamar iyo lahaansho. Iyada oo leh qulqul dabiici ah, dareen leh, oo aan dhib lahayn, martidu waxay haystaan ​​waxa ay u baahan yihiin oo ay ku gaari karaan gacanta, dhammaantoodna waxay ka soo horjeedaan muuqaal soo dhaweyn leh oo dareemaya diiran oo raaxo leh haddana la safeeyey.
Sheraton Djibouti waxaa ka muuqda waxyaalo badan oo saxeexa aragtida cusub ee Sheraton. Tan waxaa ka mid ah Shaxda Beesha, goob shaqo oo soo dhaweyn leh, oo ujeeddo loo dhisay oo ku xidha hudheelka hudheelka una oggolaanaya martida inay shaqeeyaan, wax cunaan, waxna cabbaan inta ay qoynayaan tamarta goobta. Iyada oo la raacayo falsafadda Sheraton si loo qaabeeyo qaabka iyo shaqada labadaba, jadwaladani waa kuwo si gaar ah loogu talagalay oo leh adeegyo si martida looga dhigo kuwo wax soo saar leh oo ay ku jiraan nalal la dhisay iyo koronto.
Istuudiyaha waa meelo wax lagu ururiyo oo dabacsan la heli karo si loo ballansado mar kasta oo uu marti u baahdo, fududeynta wada shaqaynta, isku -xidhka iyo dhex -dhexaadinta goob aan rasmi ahayn. Waxaa lagu dhisay meelihii kor loo qaaday oo lagu dhajiyay galaas, Studios-ka farsamada karti u leh ayaa u oggolaanaya martida inay gacan ka geystaan ​​tamarta goobta dadweynaha iyadoo sidoo kale bixineysa asturnaanta iyo diiradda shirarka kooxda yar ama khibradaha cuntada gaarka loo leeyahay.
Cuntada iyo sharaabka cusub ee Sheraton Djibouti ee sare -u -qaadka ah ayaa abuuraya meel muhiim u ah waayo -aragnimada ololaha. Bar bar, qayb qaxwaha qayb ah iyo suuqa qayb, the Qaxwada waa tiir dhexaad u ah aragtida cusub ee Sheraton, oo u kala wareejisa martida si aan kala go 'lahayn maalin ilaa habeen leh xulashooyinka cuntada ee laga helo gudaha, si sahlan loo cuni karo inta la shaqeynayo oo la habeyn karo si loo waafajiyo dhammaan dhadhanka iyo jadwalka waqtiga.
QAXOOTIGA & NOLOLKU WUXUU KU SAMEEYAA SOO -SAARKA TARTANKA
Qolalka martida, oo lagu samaynayo dayactir weji leh, martida waxaa lagu soo dhaweynayaa meel aad u iftiimaya, si fiicanna u iftiimin leh oo leh soo dhaweyn diirran. Dhameystirnaanta jilicsan iyo codadka qoryaha fudud ayaa lagu kaabayaa lahjadaha buluugga iyo turquoise ee ay dhiirri -gelisay badda Jabuuti, halka darbiyada lagu qurxiyey farshaxanka maxalliga ah ee waxyi -doonka ah. Qolalka martida oo waasac ah oo casri ah ayaa dib loogu cabiray qalab cusub oo wax soo saar leh, sida fiilooyinka USB iyo guddiyada warbaahinta. Martidu waxay ku raaxaysan karaan dhammaan raaxooyinka laga filayo joogitaanka Sheraton oo ay ku jiraan sariirta madal ee waayo-aragnimada hurdada ee Sheraton iyo qubeysyada casriga ah ee lugaynta.
Qolka Naadiga Sheraton ee la beddelay waa meel u gaar ah Marriott Bonvoy Xubnaha Elite iyo martida heerka Sheraton Club, waxayna siiyaan jawi soo dhaweyn iyo sare u kac ah oo si habsami leh ugu gudba hawlihii subaxdii ilaa fiidkii. Martidu waxay heli doontaa cunto iyo cabitaanno la cusboonaysiiyay, adeegyo qaali ah, isku xirnaan la xoojiyay, iyo helitaanka 24/7 ee deegaan gaar ah.
MARTIDA SOO DHAWEYNTA GANACSI AMA FASAX
Martidu waxay heli karaan hoteello badan oo firaaqo ah oo ay ku jiraan barkadda bannaanka ee ku taal Badda Cas halkaas oo martidu ku nasan karto kuna cuni karto makhaayadda xeebta, Khamsin Pool Bar. Xeebta gaarka loo leeyahay ee hudheelka ayaa ah goob aan caadi ahayn oo lagu qabto shirar gaar loo leeyahay, oo la dubay marka qorraxdu dhacdo oo lagu raaxeysto waxqabadyada biyaha sida kaxaynta iyo doon -ka -dabaasha. Crystal Lounge waa meel ay jecel yihiin bulshada maxalliga ah waxayna bixisaa xulasho cabitaanno ah, cunto fudud iyo maaweelo fiidkii.
Sheraton Djibouti waxaa ku yaal 327 mitir oo laba jibbaaran oo dhacdooyin ah, oo ay ku jiraan 3 qol kulan iyo qolka kubbadda oo la dayactiray oo qaadi kara 180 qof oo marti ah. Kulanka xirfadeed ee hudheelka iyo xirfadleyaasha dhacdada ayaa bixiya dhammaan khibradda iyo kaalmada lagama maarmaanka u ah isu imaatinnada guuleysta oo u dhexeeya shirar koox koox ah ilaa xaflado aroos oo waaweyn.
Boumediene Ouadjed, Maareeyaha Guud ee Sheraton Djibouti, ayaa yidhi "Waan ku faraxsanahay inaan soo dhoweyno socdaalayaasha caalamiga ah iyo dadka deegaanka si isku mid ah si aan ula kulanno meelaha cusub ee dhiirrigelinta leh ee Sheraton Djibouti," . Baaxadeeda oo aad u ballaaran oo ay ku jiraan harooyinka milixda, bannaanka qallafsan iyo dooxooyinka dhagaxa leh, ayaa ka dhigaysa meel aad u wanaagsan dadka jecel dabeecadda. ”
Wixii macluumaad dheeraad ah fadlan booqo www.sheratondjibouti.com